> Resource> Naghachi> Raw Photo Recovery: Olee naghachi Raw Photos si Digital Igwefoto
Olee otú iji weghachite Raw Images na igwefoto dijitalụ m?
Hi, M mmadụ na mberede formatted na Sandisk CF na kaadị m Canon 5D2 igwefoto dijitalụ. E nwere ụfọdụ raw photos na kaadị. Ọ bụ kwe m omume iji weghachite ha? M na-atụ onye nwere ike ikwu m ụfọdụ ngwá ọrụ ma ọ bụ mmemme iji weghachi raw oyiyi si m CF kaadị. Ezi echiche.
Ọ bụ n'ezie a ọdachi ma ọ bụrụ na ị ehichapụ ma ọ bụ formatted raw oyiyi na gị dijitalụ igwefoto na-enweghị na-ebufe ha gị na kọmputa. Ma, ebe a bụ eziokwu banyere furu efu raw oyiyi na gị igwefoto: ha na-dị nnọọ akara dị ka keerughi data tupu ọhụrụ data na-edochi ha. Nke a na-eme ka o kwe gị omume naghachi raw foto gị igwefoto dijitalụ.
Ị nwere ike ịkwụsị iji gị igwefoto dijitalụ na anya n'ihi na a raw foto mgbake omume maka enyemaka ozugbo. Wondershare Data Recovery, Ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac nwere ike ịbụ gị nhọrọ kasị mma iji weghachi raw oyiyi si gị igwefoto dijitalụ, n'agbanyeghị raw oyiyi na-efu n'ihi nhichapụ, formatting, usoro njehie ma ọ bụ ọbụna virus agha. Na ya mfe na-eji na mma-interface, ị nwere ike effortlessly naghachi raw foto site na fọrọ nke nta niile igwefoto dijitalụ ụdị, gụnyere Canon (CR2, CRW), Sony (ARW, SRF, SR2), Kodak (DCR, K25, KDC), Nikon (NEF), Panasonic (RW2), Fuji (RAF) na ndị ọzọ.
Ị nwere ike ibudata a ikpe mbipute nke usoro ihe omume na-amalite na igwefoto dijitalụ raw foto mgbake ugbu a!
Naghachi Raw Photos si Digital Igwefoto na 3 Nzọụkwụ
Cheta na: Iji naghachi niile furu efu raw oyiyi si gị igwefoto dijitalụ, biko kwụsị iji ngwaọrụ gị iji zere data overwritten na eme ka n'aka gị igwefoto dijitalụ ma ọ bụ ya na kaadị ebe nchekwa nwere ike ghọtara site na kọmputa.
Ugbu a, ka ịrụ igwefoto dijitalụ raw foto mgbake na Wondershare Data Recovery maka Windows.
Nzọụkwụ 1 Họrọ a mgbake mode iji weghachi oyiyi si gị igwefoto dijitalụ
Jikọọ gị igwefoto dijitalụ ma ọ bụ ya na ebe nchekwa na kọmputa gị na ẹkedori Wondershare Data Recovery omume, na ị ga-ahụ ihe omume mmalite interface dị ka ndị na.
Naghachi furu efu, ehichapụ, formatted ma ọ bụ merụọ raw oyiyi, ị nwere ike họrọ "Echefuola File Iweghachite" mode na-amalite.
Nzọụkwụ 2 iṅomi gị igwefoto dijitalụ ma ọ bụ ya na ebe nchekwa anya n'ihi na furu efu raw oyiyi
Ebe a ị na mkpa ịhọrọ gị igwefoto dijitalụ ma ọ bụ ya na ebe nchekwa na pịa "Malite" bọtịnụ na window ka usoro ihe omume search maka raw oyiyi na ya.
Ọ bụrụ na raw oyiyi e formatted si gị igwefoto dijitalụ, ị nwekwara ike họrọ "Kwado Deep iṅomi" nhọrọ ke window.
Nzọụkwụ 3 Naghachi raw foto gị na igwefoto dijitalụ
Mgbe scanning, niile hụrụ raw foto na igwefoto gị ga-egosipụta na "File Pịnye" ma ọ bụ "Ụzọ" Atiya ke window. Ịnwere ike ihuchalu niile raw oyiyi elele ma gị furu efu photos nwere ike natara ma ọ bụ.
Mgbe ahụ, ị ​​na mkpa iji họrọ ndị raw oyiyi ị na-aga iji naputa na pịa "Naghachi" zọpụta ha na ọnọdụ ọ bụla na kọmputa gị.
Cheta na: Biko adịghị na-natara raw oyiyi gị igwefoto dijitalụ ozugbo ke mgbake.